samedi, 02 juin 2018 19:29
Mitsinjo - Boeny: Tsy hita popoka ireo fitaovana informatikan’ny CISCO
Ordinatera sy fitaovana miisa folo mahery sy fitaovana toy ny “imprimante”,... no nanjavona.
Efa natao ny fitsirihana sy fanamarinana ny fahabangana niarahana tamin’ny lehiben’ny Distrikan’i Mitsinjo, ary nanaovana tatitra nalefa amin’ny ambaratonga ambony mifehy ny fanabeazam-pirenena ato amin’ny faritra Boeny.
samedi, 02 juin 2018 13:36
Port-Bergé: Nakaton'ny vahoaka ny biraon'ny Kaominina sy Distrika
Olana niseho efa hatramin'ny alarobia ity eto Port-Bergé ity tafiditra amin'ny hetsiky ny fanovana.
Tsy asa an-terivozina akory, fa isika manana olona 4 millions eo tsy an'asa na miasa fa tsy mahavelon-tena ny karamany.
Ka ampiasaina amin'ny toerana sy andraikitra sahaza azy avokoa ireo olona ireo.
Ny informaticien omena andraikitra amin'ny informatisation de l’administration, ny dokotera alefa any amin'ny hopitaly ambanivohitra rehetra, ny mpampianatra mampianatra, ny mpanao barazy manao barazy fambolena, ny mpanao lalana manao lalana.
Tsy ilay mpamaky vato misy rojo vy eritreretin'ny sasany akory, amin'izao misy engin, machine mahavita izany. Tsy manakana izay asa tanana ihany koa anefa izany.
Betsaka ny asa ampanaovina azy ireo:
samedi, 02 juin 2018 08:40
Ivato-Ambohidratrimo: Ho vitaina 3 volana ny tsena
Nanao fanamby tamin'ny mponina teto amin'ny Kaominina Ivato ny Ben'ny Tanàna, Penjy Randrianarisoa, fa ho vitaina ao anatin'ny 3 volana ny fanamboarana ny tsena lehibe ari-fomba eto Ivato Ambohidratrimo, izay varavarana miditra eto Madagasikara Ivato aéroport.
samedi, 02 juin 2018 08:33
Palais d’Iavoloha: Une envoyée spéciale du Président de l’Afrique du Sud s'enquiert de la situation de crise à Madagascar
Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a reçu la Ministre des relations internationales et de la coopération de l’Afrique du Sud, Lindiwe Sisulu, dans l’après-midi du 1er juin. Elle était accompagnée de l’Ambassadrice d’Afrique du Sud, Maud Dlomo.
samedi, 02 juin 2018 08:31
Antsirabe: Fanentanana amin’ny fihinanana sakafo azo antoka sy tsara
Ny Tanànan’Antsirabe, renivohitry ny faritra Vakinankaratra no nampiantrano ny fankalazana nasionaly ny « Androm-pirenena ho fampiroboroboana ny sakafo azo antoka sy tsara kalitao » tamin’ity toana ity. Notanterahina nanoloana ny tsangambaton’ny fahaleovantena izany ny zoma 01 jona 2018.
Tanjona ny hampahafataran’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny antony tokony hihinanana sakafo ara-pahasalamana sy tsara mba hanana fahasalamana tsara ihany koa.